निद्रामै यौनसम्पर्क गर्ने तर केही थाहा नपाउने यो कस्तो रोग, कतै तपाईलाई पनि यस्तै हुन्छ कि ?
Tuesday,9Jan, 2018 9:11 PM
निद्रामै उठेर हिड्ने रोगका बारेमा हामीले सुनेकै छौं । तर निद्रामै यौनसम्पर्कको कोशिस गर्ने रोग पनि हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, अनौठो मान्नु पर्दैन यस्तै रोगका कारण बेलायतका एक जोडीले सास्ती व्यहोरेको बीबीसीले जनाएको छ । टम र सारा छोटो समयमै असल साथी बनेका थिए । उनीहरू एकअर्काबीच हासीमजाक खुब गर्दथे । सारालाई टामको हासी मजाक गर्ने शैलीले उनको भाइको याद दिलाउथ्यो । उनीहरूबीच चिनजान भएको एक सातामै धेरैपटक डेटमा पनि गए । दोस्ती चल्दै जाँदा कतिपटक सारा टाँमको फ्याटमा नै बिना संकोस बास बसिन । टमले पनि साराको फ्लाटमा पटक पटक रात बिताइसकेका थिए । यो बीचमा दुबैले एक अर्काका बारेमा धेरै कुरा जानिसकेका थिए । एक रात जब ती दुवैजना एउटै विस्तारामा सुतिरहेका थिए तब सारा पूरै बेचैन भइन् ।
मस्त निद्रामा रहेको टमले साराको छातीमा हात लगाउन थाल्यो । एकैछिनमा टमले सारालाई जबरजस्ती यौनकार्य गर्न कोशिस गर्यो । साराका लागि यो निकै अजिव र बेचैन सावित भयो । दुवै जनाको सम्बन्ध सुरूवाती चरणमा भएकाले साराले यस बारेमा केही बोलिनन् । उनी भन्छिन् ‘मलाई लाग्यो की उनी सायद अलि मजाक गर्ने मुडमा छन्, मैले यस विषयलाई नजरअन्दाज गरिदिए ।’ समय बित्दै गयो । सारा र टम झन् झन् करीब हुन थाले । दुबै जना सँगै खाना खाने, फिल्म हेर्न जाने गर्न थाले । दुबैलाई एक अर्काका साथमा समय बिताउन निकै राम्रो लाग्थ्यो । एक दिन दुबैजना सँगै पार्टीमा गए । दुबै जनाले केही मात्रामा रक्सी पनि पिए । आधा रातमा जब साराको निद्रा टुट्यो त्यति बेला टमले आफ्नो साथमा सेक्स गर्न कोशिस गरिरहेको साराले पाइन् ।
सारालाई यी सबै घटना राम्रो लागेनन् र अर्को दिन टमसँगका सबै सम्बन्ध टुङग्याउनु पर्ने सोचाइमा सारा पुगिन् । तर, टमको जवाफ सुनेर सारा तीन छक परिन् । उनले भनिन् ‘टमले आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताए । तर म निकै रिसाएकी थिए किनकी उसको रातीको व्यवहारले मेरो निद्रा बिथोलिएर सुत्नै सकेकी थिइन् ।’ टमको भनाई अनुसार राती सारासँग सेक्सका लागि कोशिस गरेको विषयमा टमलाई केही जानकारी थिएन । उ पूरै बेखबर थियो । साराका साथ जे भएको थियो त्यो सुनेर टम निकैमा तनावमा देखिन्थे । सारालाई आफूले नोक्सान पुर्याएको भन्दै टम निकै चिन्तित बने ।
त्यो समयमा के गरौ कसो गरौ भएको साराले बताइन । टमले झण्डै बलात्कारको ढङ्गमा गरेको क्रियाकलाप अघिपछिका उसका व्यवहार भन्दा धेरै फरक थियो । दिनमा उसको व्यवहार, निकै संवेदनशिल, स्नेही तथा मायालु थियो । सारालाई यो पनि याद थियो की टमसँग उसकी पूर्व प्रेमिकाले बलात्कारको आरोप लगाएर मुद्दा जित्दै टमलाई ७ वर्षको जेल सँजाय समेत भइसकेको थियो । यो घटना त्यतिबेला भएको थियो जब टम सानो छोरासँग समय बिताइरहेका थिए । उनले आफ्नी गर्लफ्रेण्ड क्यारनसँगै मदिरा पिएका थिए र फिल्म पनि हेरेका थिए । त्यसपछि टम सुत्न गएका थिए । सुत्ने बित्तिकै उनी निदाएका थिए । सुतेको ४५ मिनेटपछि क्यारेनको चिच्चाहटपछि टमको निद्रा टुट्यो र उनलाई क्यारिनले जोड जोडले गाली गरिरहेकी थिइन । क्यारिनको चिच्चाहटले टम हड्बडाएका थिए ।
उनी त्यहि समयमा आफ्ना समान लिएर राती नै फ्ल्याट छोडेर हिडे । टम भन्छन्, ‘क्यारिनले चिच्चाउनु भन्दा अगाडी के भएको थियो मलाई केही पनि थाहा छैन् ।’ टमले राती देखाउने अजिव व्यवहारका कारण सारा चिन्तित थिइन र कुनै राम्रो चिकित्सकसँग चेकअप गराउनुपर्ने उनलाई लाग्यो । उनीहरूले चिकित्सकसँग सल्लाह लिए र लण्डनको गाथ्ज एण्ड सेट थोमस हस्पिटलको स्लीप क्लिनिकमा गए । त्यहाँ टमको शरीरको धेरै भागमा इलेक्ट्रोड लगाइयो र राति सुत्नका लागि भनियो ताकी उनको दिमागमा भइरहेको क्रियाकलापका बारेमा जानकारी मिलोस् । यो बीचमा चिकित्सकहरूले जे भेटे त्यसले टमको पूरा जिन्दगी बदलदियो । टमको केस कन्सलटेण्ट न्यूरोलोष्जिट डा. गाय लेच्सजिनरले हेरिरहेका थिए । डा. गायका अनुसार टम गहिरो निद्रामा भएको बेला उनको दिमागमा एक अजिव खालको क्रियाकलाप पैदा हुनेगर्छ । उनको दिमागको सानो दिमाग एक लयमा चलिरहेको भेटियो जुन दिमागले यो संकेत गरिरहेको भेटियो कि मानिस अझै निदाइसकेको छैन् जागै छ ।
टमको जाँच, साराले टमका बारेमा बताएका घटना लगायतको विश्लेषणपछि डा. गाय निद्रासँग जोडिएको एक अजीव रोग सेक्सोमनियाद्वारा टम ग्रसित रहेको निश्कर्षमा पुगे । सेक्सोमनियाको सम्बन्ध निद्रामा हिड्नेदेखि राती डराउनेसम्म रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । येल विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मीर क्राइगर भन्छन् ‘सबै खालका स्लीप डिसअडरलाई पारासोमनिया भनिन्छ । यसको लक्षण रातको पहिलो चरणमा देखिन्छ जब व्यक्ति गहिरो निद्रामा पुगेको हुन्छ । प्रोफेसर येलका अनुसार निद्रामा हिड्नेवाला व्यक्ति जागै भएको एउटा दिमागले सूचना दिइरहेको हुन्छ तर, खासमा त्यो सत्य होइन् ।